Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol Uk oo dooratay Guddoomiye Cusub | Banaadir Times
Home Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol Uk oo dooratay Guddoomiye Cusub
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol Uk oo dooratay Guddoomiye Cusub
Kulan ay isku yimaaden waxgarad aqoon yahanno Siyaasiyiin Dumar iyo bulsha qeybaheeda kala duwan ayaa waxaa looga dooday ineey muhiim tahay in la doorto Gudoomiyaha Jaaliyadda Bristol ee Uk, Dood dheer kadib waxaa la isku afgartay ineey muhiim tahay in la helo Hogaan isku wadi kara jaaliyadda Guud ee Bristol.
waxaa goobta hadalka Furan Aqoon yahan Nabaddoon Cabdulaahi Ibraahim Caseyr oo ku dheeraaday hadalka ayaa xusay in maanta aan lagu kala tagin ilaa laga doorto Hogaanka Jaaliyadda.
Waxaa sidoo kale ayagane goobta ka hadlay waxgaradkii xalafladda ka soo qeybgalay waxaana la isku raacan in ay muhiim tahay Caawa in lagu dhawaaqo Hogaamiyaha Jaaliyadda Bristol 5 ta sano ee soo socoto.
dhanka kale waxaa hadalka la siiyay Dumarkii ka soo qeybgalay Xafladda waxa ayna ku raaceen odayaansha in la doorta caawa shaqisiga Hogaamin Doonta Jaaliyadda Bristol, Odayaashii iyo waxgaradkii waxa ay isku raaceen in loo doorto Guddoomiyaha Jaaliyadda Bristol Mudane Cabdishakuur Ibraahim Cali oo ah Shaqsi aad ugu weyn Jaaliyadda Uk waxaana loo doortay 5ta sano ee soo socota.
ugu danbeyn waxaa hadalka la siiyay Gudoomiyaha cusub ee Bristol Mudane Cabdishakuur waxa uuna yiri sida tan.
” Marka hore walaalayaal aad baad ugu mahadsan tihiin xilka culus ee aad ii dhiibteen waxaan allaah ka baryayaa inu ii fududeyo howshaan cusus waa shaqo aad u dhib badan waxaana idinka codsanayaa inaad ila shaqeysaan si aan dhamaanteen aan isku garabsanno waa muhiim inaan gacmaha is qabsanaa walaalayaal ( Gacmo wadajir bay wax ku gooyaan waana mahadsantihiin.